Evanjelista na Evanjelistra no iantsoana ireo olona nanoratra ny Filazantsara na Evanjely na Vaovao Mahafaly efatra ao aminny Testamenta Vaovao ao aminny Baiboly. Ny roa ihany no anisanny Apostoly roa ambinny folo: i Matio sy i Joany. I Marka sy ...
Ny anarana hoe Joda na Jodà dia anarana be mpitondra. Ao aminny Baiboly sy ao aminny lovantsofina Kristiana dia maro ny olona mitondra io anarana io. Ao aminny Testamenta Taloha: I Joda na Jodà zanaki Jakoba Ny Fanjakani Jodà izay atao hoe Jodà n ...
I Lokmàna dia olon-kendry niaina talohanny nisianny finoana silamo izay resahina ao aminny soràta faha-31 ao aminny Korany. Araka ny lovantsofina silamo dia olon-kendry niaina taminny taonjato faha-11 tal. J.K. i Lokmàna sady avy any Abisinia na ...
I Malakia na Malakỳ dia mpaminany israelita tamin’ny taonjato faha-5 izay heverina, araka ny lovantsofina, fa nanoratra ny boky ao amin’ny Baiboly izay mitondra ny anarany, dia ny Bokin’i Malakia.
Ny tetiandro persana na tetiandro jalaly na tetiandro iraniana dia tetiandro manara-masoandro ampiasaina indrindra ao Iràna sy ao Afganistàna. Avy aminny tetiandro zoroastriana nampiasaina tany Persia talohanny fahatongavanny finoana silamo tao n ...
I Marka dia ilay heverina, araka ny lovantsofina, fa nanoratra ny Evanjely na Filazantsara mitondra ny anarany. Mpanara-dia akaiky ani Simona Petera sy ani Paoly Apostoly izy fa tsy isanireo Apostoly roa ambinny folo lahy. Jaona Marka koa no fian ...
Ny Torah am-bava, izay atao aminny teny hebreo hoe תורה שבעל פה / Torah SheBeal Pe, dia teny anondroana ny hevitry ny foto-pampianarana sy ny tahirin-dahatsoratra momba izany izay ampitaina am-bava ao aminny fivavahana jiosy, sady fanampinny Tora ...
I Jeremia dia mpaminany tao aminny Fanjakani Joda izay heverina araka ny lovantsofina fa nanoratra ny Bokini Jeremia ao aminny Tanakh na ny Testamenta Taloha ao aminny Baiboly. Teraka tokony ho tamin’ny taona 650 tal. J.K. tao akaikin’i Jerosalem ...
Ratsimivily dia mpanjakan’ ny Bara Imamono. Izy no mpanjaka nahatonga ny Bara Imamono ho fanjakana nahery indrindra tao amin’ ny samy Bara. Tao Anjia tao amoron’ny reniranon Ihosy izy no nipetraka voalohany. Natosik’ i Retsila zana-drahalahiny ni ...
Andriamanely dia mpanjaka bara nalaza tamin taonjato faha-17, izay nitaranaka ny Bara Zafimanely, araka ny lovantsofina. Andriamena no rainy, izay niteraka koa an Adriamandàna sy Rebiby zokiny. Na dia zoky Andriamandana dia tsy navela hanjaka ny ...
Impoinimery na Impoinimerina na Rehandry II dia mpanjakan ny Bara Imamono, nandimby an i Rehandry rainy. Tamin ny 1873, roa taona talohan ny nahafatesan i Lehimanjaka rainy, dia nanafika ny Sakalava sy ny Merina tany Mahabo i Rehandry II ka nahaz ...
Rakitroka Ratsileondrafy dia mpanjaka bara zafimanely, rahalahin-dRamitongoa, zanak Andriamanafotsarivo. Izy no nandimby an-dRamitongoan izay naogan ny vahoaka noho ny herisetrany. Mpiady mahery Rakitroka Ratsileondrafy. Nanafika ny Tsienimbalala ...
I Rainibahy dia mpajaka bara nandimby an i Tsimanompo. Nanampy an Impoinimery, mpanjakan ny Bara Imamono, i Rainibahy tamin ny adin’ ny Bara sy ny Masikoro. Tsy naharitra teo amin ny fitondrana Rainibahy noho izy nasiaka sy nahery setra ka naonga ...
Mpanjaka bara: Andriamanafotsarivo - Andriamanely - Imasoandro - Impoinimery - Isambo - Rabararatavokoky - Rainibahy - Rakanjobe - Rakitroka Ratsileondrafy - Ramieba - Ramitongoa - Rapapango - Ratsimamotoa - Ratsimivily - Ravatoverere - Rehandry ...
Ravatoverere dia mpanjaka bara izay nampanaiky ny foko niaraka taminy fa ny fianakaviany no manjaka sy mametra ny fitsipika mandamina ny fifandimbiasan ny mpanajaka bara. Vehivavy fotsy hoditra no vadiny. Niainga avy tany am-bava ranon i Mandrare ...
Ramieba dia mpanjaka bara, zanak i Tonanahary, rahalahin-dRetsila, nanjaka tamin’ ny Bara Be tao Ihosy. Nanao raharam-pihavanana tamin ny Merina ary nitondra koa an i Ranohira taorian’ ny nahafatesan Ikanapaka zanak i Retsila. Mafy dia mafy koa n ...
Kaody bara na antsoina hoe, dia fitaovana entina hamaritana sy ny ahafantarana ny sary mifona kaody nomerika. Taminny taona 7 oktobra 1952 no nivoahany voalohany ka ireo mpianatra Amerikanina: Norman Joseph Woodland sy Bernard Silver no nipoirany ...
Rapapango dia mpanjaka bara. Andriankeoheo no rainy ary i Rakobaha no rahalahiny. Rabararatavokoky, zanaka lahitokan i Ravatoverere, no rain Andriankeoheo. Nandefitra tsy hanjaka handimby an Andriankeoheo rainy Rakobaha na dia zokiny aza ka navel ...
Epistily katôlika na Epistola katôlika na Taratasy katôlika no iantsoana ireo epistily fito milahatra ao aorianny epistily atao hoe nosoratani Paoly ao aminny Testamenta Vaovao ao aminny Baiboly. Ireto avy izy ireo: ny Epistily nosoratani Jakoba, ...
Ny Epistily nosoratani Joda, Epistola nosoratani Joda na Taratasy nosoratani Joda dia boky ao aminny Baiboly ao aminny Testamenta Vaovao izay isanireo atao hoe epistily. Isanireo Aatao hoe Epistily katolika io epistily io noho izy tsy natokana ho ...
Ny Epistily ho ani Filemona na Epistola nosoratani Masindahy Paoly ho ani Filemôna na Taratasy nosoratani Masindahy Paoly ho ani Filemôna dia boky ao aminny Baiboly ao aminny Testamenta Vaovao izay isanireo atao hoe epistily. Taratasy nosoratani ...
Ny Epistily ho anny Romana na Taratasini Masindahy Paoly ho anny Rômanina dia boky hita ao aminny Baiboly, ao aminny Testamenta Vaovao, isanireo epistily nosoratani Paoly. Taratasy nosoratani Paoly ho anireo Kristiana tany Roma izy io ka ao izy n ...
Ny Epistily nosoratan i Jakoba na Epistola nosoratan i Masindahy Jakoba na Taratasy nosoratan i Masindahy Jakoba dia boky ao amin ny Testamenta Vaovao ao amin ny Baiboly kristiana izay isan ireo atao hoe epistily. Mitonon-tena ho i Jakoba ny mpan ...
Ny Epistily ho ani Titosy na Epistola nosoratani Masindahy Paoly ho ani Tito na Taratasy nosoratani Masindahy Paoly ho ani Tito dia boky hita ao aminny Baiboly, ao aminny Testamenta Vaovao, izay atao hoe epistily. Taratasy nosoratani Paoly ho ani ...
Ity lisitry ny epistily aseho eto ity dia tsy feno. Epistilini Paoly ho anny Laodikiana Epistilinny Pseodo-Titosy Kerigmani Petera Epistilinny Barnabà Epistily ho ani Lentolosy Epistilinny Apostoly Kerigmani Paoly Epistily fahatelo ho anny Korint ...
Epistilin i Paoly na Epistola nosoratan i Paoly na Taratasy nosoratan i Paoly no ilazana ireo epistily telo ambin ny folo ao amin ny Baiboly, ao amin ny Testamenta Vaovao, izay lazaina fa nosoratan i Paoly. Misy amin izy ireo ny nosoratana ho ana ...
Ny Epistily ho anny Kolosiana na Taratasini Masindahy Paoly ho anny Kôlôsianina dia boky hita ao aminny Baiboly, ao aminny Testamenta Vaovao izay isanny atao hoe epistily. Taratasy nalefanny Apostoly Paoly ho anny fiangonana kristiana tany Kolosi ...
Ny Epistily ho anny Efesiana na Taratasini Masindahy Paoly ho anny Efezianina dia boky hita ao aminny Baiboly, ao aminny Testamenta Vaovao izay isanny atao hoe epistily. Taratasy nalefanny Apostoly Paoly ho anny fiangonana kristiana tany Efesosy ...
Ny Epistily faharoa nosoratani Petera na Epistola faharoa nosoratani Piera na Taratasy faharoa nosoratani Piera dia boky ao aminny Baiboly ao aminny Testamenta Vaovao izay isanireo atao hoe epistily. Atao hoe Epistily katolika io epistily io noho ...
Ny Epistily ho anny Filipiana na Taratasini Masindahy Paoly ho anny Filipianina dia boky hita ao aminny Baiboly, ao aminny Testamenta Vaovao izay isanny atao hoe epistily. Taratasy nalefanny Apostoly Paoly ho anny fiangonana tany Filipy izany. To ...
Ny Vatravatra dia iray aminireo volana malagasy mitondra anarana avy aminny teny sanskrita. Ny Asotry no eo alohany ary ny Hatsiha no eo aoriany. Na dia mampiasa teny mitovy na mitovitovy aza ny isam-paritra dia mety samihafa ny fari-potoana ao a ...
Ny Agadà na Hagadà dia ireo fampianarana araka ny lovantsofina jiosy tsy momba ny lalàna ary ny literatiora mirakitra anireo fampianarana ireo. Ao aminizany literatiora izany dia ahitana fitantarana, angano, fedrà, toriteny, sombin-tantara, fanan ...
Ny Pleiada dia anarana iantsoana ireo zanaka vavy fitonny Titàna Atlasy sy ny Okeanisa Pleionê. Antsoina aminny teny grika hoe Πλειάδες / Pleiádes izy ireo. Avy aminny anaran-dreninizy ireo no nahazoana io anarana iombonany io. Izao avy ny anaran ...
Ny Ούκκο dia asteroid ny Tena Fehin-kibo Asteroids aminny fahazavana 11.33. Izany dia hita taminny 1936 ny zavatra astronoma Y. Väisälä, izay nahita avy any Turku any Finland, ary naka ny anarany avy ny eponymous antampony ny maha-andriamanitra n ...
Ny fanahy, araka ny karazam-pinoana sy fivavahana maro, dia zavatra manan-tsitrapo nefa tsy azo tsapain-tanana, izay mety ho hitanny maso indraindray, ka heverina fa manana hery tsy araka ny mahazatra, sady mety hampianjady ny hery sy ny fahefany ...
Ny Amalekita dia foko mpifindrafindra toerana resahina ao aminny Baiboly, taranaki Amaleka, izay nivelona tany aminny tapany atsimoni Jodea, eo anelanelani Idomea sy ny tany efitri Sinay any Egipta. Araka ny Baiboly dia niady matetika taminny Isr ...
Ny Baiboly dia boky inoanny Kristiana sy ny Jiosy fa Soratra Masina mirakitra ny tenin Andriamanitra. Ny Baibolinny Jiosy na Baiboly hebreo, izay tsy ahitana afa-tsy ny Testamenta Taloha, dia atao hoe Tanakh. Mizara roa lehibe ny Baiboly kristian ...
Ny hainteny na hain-teny dia sokajin-dahabolana malagasy izay hita indrindra ao aminny Merina, izay miendrika tononkalo fohy iresahana zava-madinika aloha, avy eo mankany aminny tena lohahevitra, ka aminny alalanny fampifandraisana aminny fomba k ...
Ahasoerosy na Asoerosy dia anaran olona hita ao amin ny Baiboly. Heverinny maro fa mitovy aminny anarana hoe Kserksesy ny hoe Ahasoerosy na Asoerosy noho izy avy amin ny anarana aminny teny persiana tranainy hoe Khšayarša. Tsy vitsy koa anefa ire ...
Andrianjaka dia mpanjaka tao amin ny Fanjakana Merina izay nanapaka tamin ny taona 1610-1630. Zanaka lahin ny mpanjaka Ralambo izy. Vitany ny fanitarana ny fanjakana natombok ireo mpanjaka teo alohany ka tao Analamanga, izay novana anarana hoe An ...
Imerina-Ambaniandro dia ny faritra nanjakan-dRalambo. Ralambo, no namorona ny teny hoe Imerina - Ambaniandro teo Ambohidrabiby, izay renivohi-panjakany. Roa amby roapolo km miala anAntananarivo aminny làlana mankany Anjozorobe no misy anAmbohidra ...
Ny Testamentani Salomona na Testamentani Solomona dia lahatsoratra apokrifa izay atao hoe nosoratani Salomona na Solomona, nefa voasoratra taminny taonjato voalohany. Io boky io dia tsy hita afa-tsy ao aminireo loharano apokrifa kristiana. Tsy hi ...
Ny PlayStation Portable na PSP dia azo entina lalao video hampionona fahafito taranaka Sony. Tsy navoaka tao Japana taminny 12 desambra 2004, any Amerika avaratra, ny 24 Martsa 2005 sy ao Eoropa taminny 1 septambra taminio taona io ihany. Ny heri ...
Ny Covid Organics, izay hafohezina amin ny hoe tambavy CVO, dia tambavy azo amin ny fandrahoana singa avy amin ny artemizià sy zavamaniry hafa izay nambaran ny filoham-pirenena malagasy Andry Rajoelina fa azo isorohana sy anasitranana ny aretina ...
Onitiana Realy dia mpanao gazety malagasy ao aminny fahitalavitra TV Plus Madagascar. Teny aminny OniversitenAntananarivo no nandratoany fianarana momba ny asa fanaovan-gazety. Efa nianatra teo anivonny CEDS ihany koa izy. Ankehitriny dia izy no ...